Senatorro iyo Wasiir katirsan Dowladda Soomaaliya oo lagu xayiray garoonka magaalada Nairobi – Kalfadhi
Senatorro iyo Wasiir katirsan Dowladda Soomaaliya oo lagu xayiray garoonka magaalada Nairobi
Dowladda Kenya ayaa garoonka magaalada Nairobi ee xarunta dalkaasi ku xayirtay laba Senator oo katirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo wasiir ku xigeenka Tamarta iyo Biyaha ee Xukuumadda Soomaaliya kadib markii loo diiday in Baasaboorkooda loogu dhufto Fiisaha dal ku-galka Kenya.
Xubnahaan Senatorada ah ayaa lagu xayiray garoonka magaalada Nairobi ayaa lagu kala magacaabaa Senator Ilyaas Cali Xasan iyo Senator Zamzam Dahir. Sidoo kale waxaa ku jira wasiir ku xigeenka Tamarta iyo Biyaha Xildhibaan Cusmaan Libaax kuwaas oo ilaa hadda ku sugan Garoonka Joma Kenyatta ee dalka Kenya.
Waaxda Socdaalka Kenya ayaa la sheegay in ay joojisay Visihii dal ku galka ahaa ee Wasiirada iyo Xildhibaanada loogu dhufan jiray garoomada diyaaradaha Kenya, waxaana tallaabadan qeyb ka tahay cadaadis siyaasadeed oo dowladda Kenya ku saareyso dowladda Soomaaliya, gaar ahaan muranka labada dal u dhaxeysa ee dhinaca Badda oo ay dacwadeeda taalo Maxkamadda Hague.
Dowladda Soomaaliya ayaa la filayaa in ay jawaab ka soo saarto tallaabooyinka ay qaaday dowladda Kenya oo la xiriira arrinta ku saabsan duulimaadyada iyo joojinta Visaha dal ku galka ee lagu qaadan jiray Garoonka Nairobi, taasoo ahaa heshiis horay labada dal u dhex maray.
Xubnahaan oo ka qayb gali lahaa Shir caalami ah oo ka dhacay Kenya islamarkaana ay ka qayb galayaan Qaramada Midoobay iyo Midowga Yurub waxayna ahaayeen siyaasiinta Soomaaliya shirkaasi ku matali lahaa. Wararka ayaa sheegaya in ay dib ugu soo laaban doonaan magaalada Muqdisho saacadaha soo socda.
Akhriso:- Doodii baarlamaanka ee Ansixinta Sharciga Badroolka dalka
Golaha Shacabka oo ka doodaya Sharci kale oo ay ku kala tageyn DF-ka iyo Maamul Gobaleedyada